Kuongororwa Kwezvigadzirwa zveSemalt uye Sei Vangakuisa Iwe muPamusoro gumi yeGoogle Searches
Peji yekutanga ye google inodzora 92% ye traffic. Izvi zvinoreva chii kune rako bhizinesi? Zvinoreva kuti SEO inonyanya kukosha kupfuura nakare kose.
Paunenge uchimhanyisa bhizinesi, kutsvaga zvinhu senge keyword density, backlinking, uye kutsvaga kwekutora kunogona kutora nguva yakawanda. Paunenge uchiedza kuedzesera izvi nekugadzirisa zvinodiwa nemutengi wako, zvinova zvisingaite. Uku kusimbiswa ndosaka iwe uchida basa rakazvitsaurwa kubva kuchikwata chevanyanzvi mune SEO.
Semalt ikambani yakaisa kukosha kweSEO kumberi. Vanopa rutsigiro kumakambani asina mune-imba SEO nyanzvi.
Ivo zvakare vanoshanda nevaya vasina kujairika neSEO nemazuva gumi nemana yemuyedzo yemabasa avo. Ivo zvakare vane chigadzirwa icho chakanyatsoitirwa avo vasingade kupinda kudivi rehunyanzvi: AutoSEO.
Kuvaka Yadzo Kubudirira Nhau
Semalt ikambani inozvinyudza pachayo pakaratidzwa track track. Vane nyaya dzakawanda dzekubudirira, dzimwe dzinoona dzinowedzera zvakanyanya. Muchiitiko cheSurgery TR, ivo vakapa chikamu chegumi nemana chekuwedzera kwevakapinda. Iwe unogona kuona iwo mafambiro ezve traffic ravo pazasi.
AutoSEO yakaisa kambani yavo mune yepamusoro zana zana nemakumi mairi nemakumi mairi nemashanu makiyi kwemwedzi mina. Izvo zvakavaunza kumusoro wegumi yaive yakazaraSESEO package. Pakeji iyi yakavatendera kurova izvo zvisingaenzaniswi makumi mapfumbamwe nerimwe muzana emigwagwa yevanhu vari kutsvaga sevhisi iyi. Tichazokurukura wongororo yakadzama yeaya mazwi gare gare, asi nyaya iri nyore ndeiyi: Semalt inoshanda.
Semalt Icho chizere-chinzvimbo chakazara chinogamuchira boka rakasiyana siyana revanhu rakavakwa kubata chero kambani inoda chinzvimbo cheSEO. Ivo isangano repasirese, saka unogona kunge uchitaura mutauro unozivikanwa navo.
Iwe unogona kutaurirana navo paSkype, WhatsApp, telegraph.me, email, kana parunhare. Iwe unogona zvese kuona timu yavo pane yavo yevashandi peji. Unogona kunyange kutora kanguva kuyemura turtle ravo.
Kutarisa iko kuChidimbu
Kana iwe uri kuverenga izvi, iwe ungangodaro unofarira SEO. Iwe unogona kunge uri freelancer, diki muridzi webhizinesi, kana shamwari yekushambadzira agency.
Chero zvazvingaitika, haungasvike kure usinga nzwisise zvimwe zvegangon muindasitiri.
SEO, kana Injini Yekutsvaga Optimization, iri kuvaka yako webhusaiti nenzira iyo kana vanhu vachitsvaga yakatarwa nguva, vanokuwana iwe. Aya mazwi, kana mazwi akakosha, anowedzera huwandu hwe traffic kune yako webhusaiti. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuva chiremba wepurasitiki anozivikanwa wein rhinoplasty, mazwi ako anogona kusanganisira "rhinoplasty kuvhiya" kana "anodhura rhinoplasty."
Google's algorithm inovaka nenzira iyo inobatanidza vanhu kune akakodzera, ane masimba webhusaiti. Ona muenzaniso uri pamusoro, uyo unoshandisa kiyi "rhinoplasty." Ivo vanezve masimba nekuti vanobva kune akavimbika masosi. Inoita izvi nekutumira matsenga, kana bots yakavakirwa kuongorora mawebhusaiti. Vakakoromoka vanotarisisa mhando zvichienderana nezvakasiyana zvinhu.
Anobvumirana Makiyi emazwi mazwi ayo algorithm inofunga yakanyatsokodzera kutsanangura zvaunoda.
Backlinks ndiko kuwanda kwekubatanidza kwezvinhu zvako zvinoratidzika pane mamwe mawebhusaiti, kunyanya kana iwo mawebhusaiti anoonekwa sechiremera.
Chivakwa chechigadzirwa ndiyo nzira yekutanga backlinks.
Zvemagariro maMedia akadai semasheya uye zvekare maTets
Kune zvimwe zvakawanda zvimwe zvinhu zvinopinda mune izvo SEO, uye isu hatizopindi mune zvese izvi pano, asi izvi zvichave zvakakosha kwauri kuti uzive kuti unzwisise izvo zvinopinda mumaitiro aSemalt. Yedu blog ine gwara rakawandisa pane SEO kana iwe ungashuwira kufambisa zvakadzama mukati mechinhu.
Sei Zvigadzirwa zveSemalt Zvinosimudzira Yako SEO
Izvozvi kuti isu tine pfungwa iri nani pane izvo zvatiri kufungidzira mukati, tinogona kupinda mune zvigadzirwa zveSemalt nekujeka kwakanyanya. Isu tinotarisa kumatunhu anowanikwa pasi pezvigadzirwa zvavo tab kuti zvinhu zvitange. Izvi zvinosanganisira:
Chii chinonzi AutoSEO?
Iyo webhusaiti inotsanangura kuti AutoSEO ndeyevaya vanoda kuwedzera webhusaiti yavo kuburitsa, asi pasina kuisa mari yakawanda. AutoSEO ndiyo yekutanga chigadzirwa kune avo vanoda kupinda mune SEO. Nevanhu zviuru gumi nezvina munyika dzinopfuura 192 chikamu chekusimudzira, yakawana mukurumbira wakanaka.
Chikonzero chikuru chekuzivikanwa uku kuyedzwa kwemazuva gumi nemana .99 cent yavanopa. Nekuwana AutoSEO, nyanzvi inopihwa kuakaunti yako kuongorora saiti yako. SEO nyanzvi dzinowana mazwi akakosha anowanzo shandiswa muindasitiri yako, asi akasarudzika zvakakwana kuti akupe iwe vashanyi vari kutsvaga kutenga.
Semalt inopa mishumo yekutumira kuburikidza nehurongwa hwavo hwekuongorora. Iwe unogona kuona kuti kambani yako iri kuita sei nekutarisa iyo dashboard, iyo iri iyo huru ficha kana uchinge wapinda mukati.
Mushure mekuongororwa kwemashoko akakosha muindasitiri yako, iyo yekupedzisira chinangwa ichave yekuvaka nzira kune yako webhusaiti kuona kuti iwe une mazita ehupamhi.
Ivo zvakare vanoshandisa anchor link, izvo zvinotora vashandisi kune imwe nzvimbo pane iyo peji iyo inoenderana navo. AutoSEO inosanganisa aya anchor kubatana neasiri-anchor kumisikidza yako zita rezita zvisanganiswa seyemvumo zvinyorwa pamwe neaya mazwi.
Mitengo pahurongwa uhwu ichasiyana kubva pamadhora mazana mapfumbamwe pamwedzi kusvika kumadhora mazana mapfumbamwe pagore. Unogona kusarudza kureba kwemushandirapamwe wako kuva mwedzi mumwe, mwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu, kana gore rimwe. Kana tichienzanisa, mamwe mazhinji mawebhusaiti e SEO ane mabhesiki emitengo pamadhora mazana mashanu pamakwikwi avo. Mapakeji awo zvakare anowanzove ane mashoma sarudzo.
Chii chinonzi FullSEO?
FullSEO ndiyo yakakwira vhezheni ye AutoSEO. Musiyano wakanyanya pakati peizvi ne AutoSEO ndeyekuti une maneja we Semalt akapihwa nyaya yako. Maneja anoshanda pamwe neiye SEO nyanzvi pakutanga, uyezve anokutumira mishumo yenguva dzose pamusoro pekufambira mberi kwe kampeni yako.
FullSEO ndeyekudyara mune ramangwana rebhizinesi rako. Iyo ROI, kana kudzoka pakudyara, kazhinji inotenderera 700% zvichibva pane zvakaitika kune vatengi zvisati zvaitika. Pamadhora zana ese aunoshandisa kuenda kune izvi, iwe unowana mazana manomwe kumashure.
Semuenzaniso, mubatanidzwa wezvivakwa muMexico wakawedzera 700% yekuwedzera mumotokari, zvichivaita kuti vaende kunhamba yekutanga pane akati wandei mazwi. Nekuve mune yepamusoro slot yemashoko mazana manomwe nemakumi manomwe, inogonesa iwo kunongedza avo vari kutsvaga nzvimbo muMexico zvakanyanya kureruka. Pasina FullSEO, vangadai vasina kumboona mwero uyu we traffic.
Kuti uenzanise zvakanaka nezve izvo mamwe makambani ari kuita, tinogona kutarisa paWebFX. WebFX inopa inoshamisa array yeSEO maitiro uye kuongorora maturusi. Nekudaro, Semalt ine mamwe mutsauko mune yavo sarudzo yemitengo.
Kune emabhizinesi madiki ane mabhajeti madiki, izvi zviri kudhura zvakanyanya. Pasi peiyo FullSEO sarudzo, Semalt anofara kukuwanira mutengo wekutengesa kune yavo yepanzvimbo SEO package. Semalt anoona kushanda nebhajeti yako. Kukurumidza kuongorora webhusaiti yavo kunozivisa mashoma emadhora pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora pamwedzi.
Unogona kuedza nenzira yakaoma kuedza kwemazuva 14 uye AutoSEO kuti uzvisunungure iwe pachako mune ipfungwa yeizvi. Nekudaro, iwe ungangoda kushandisa webhusaiti yakasarudzika, sezvo Semalt achakuudza kuti ipasuru ipi inoshanda zvakanyanya kune imwe neimwe saiti. Zvakare, vamwe vatengesi havapi mutsauko mumwechetewo wezvigadzirwa izvo Semalt.
Chii chinonzi E-Commerce SEO?
Semalt inopa chigadzirwa chakakosha kune avo vane E-Commerce, kana online chitoro, zvinodiwa. Iyi phukusi yakafanana neiya yatotaurwa kare uye ndeyekuwedzera kweiyo AutoSEO uye FullSEO chigadzirwa.
Semalt inonongedza yakaderera-frequency mazwi makuru anobva pane zvigadzirwa uye rudzi. Mazwi akakosha iwe aunoda kukwirira, kana mazwi akakosha avanogona kupa, anotariswa kune vanhu vari kutsvaga chimwe chigadzirwa.
Semuenzaniso, kana iwe uchida kuenderana neshoko rakakosha, "mawadhi evarume anodhura anotaridzika anodhura," iwe uchaona kuti runyorwa rwepamusoro runyorwa runosanganisira chinyorwa chinyorwa kana vhidhiyo.
NeE-Commerce, unogona kuwana wachi yako pakati pemazita gumi epamusoro kana mavhidhiyo. Nedzimwe dzakanyatsogadzirirwa-mazwi uye SEO inowedzera, iwe uchaunza bhizinesi rako kune iro rakaenzana rekuremekedza kune iri kiyi kiyi.
Chii chinonzi Analytics?
Analytics ishoko rinoshandiswa nemakambani mazhinji. Google ineese app yakavakirwa kuteedzera ma ads akabhadharwa ari kuita sei anonzi Google Analytics. Ichi chigadzirwa chiri zvimwe chemhando ye AutoSEO uye FullSEO, uye iyo dashboard inouya nezvigadzirwa zvese zviri zviviri.
YeSaltalt yekuongororesa chishandiso inopa kuvimba kumutengi nenzira yakadaro iyo inogona kuve nyore kuverenga. Inopawo Semalt neinopa sosi yekuzvidavirira, ichikupa humbowo hweyako mibhadharo yakabhadharwa ichishanda. Pazasi pane mamwe masitori evanhu vanoshandisa iyo analytics ficha.
Kuongorora kwakadzika kunokupa iwe kugona kuongorora vakwikwidzi vako, kuziva misika mitsva, uye nekugamuchira akakurudzirwa mazwi anodikanwa kuti ubatise pane iro ruzivo. Zvakare, Semalt inokubvumira kuti uongorore zvigaro zvako chero nguva yezuva.
Ukaona webhusaiti ichienda kubva kuHTTP kuenda kuHTTPS, uyu muenzaniso weSitifiketi reSSL mukushandisa. Iyi chengetedzo inovhara data rako kuitira kuti zviite kuti zviomere kune vanozeza kuti vawane mukana wekuziva ruzivo, senge kadhi rechikwereti.
Izvo zvinodikanwa kana iwe uri E-Commerce webhusaiti kana webhusaiti-based webhusaiti inochengetedza chero inonzwisisika yevatengi data. Zvakare, kana Google ichizivisa saiti yako senzvimbo yakachengeteka, ichave nemukana uri nani wekusvika nzvimbo dzakakwirira.
Pfupiso yekuti Semalt Anogona Sei Kukubatsira Iwe Chikamu mune yepamusoro 10
Ine rekodhi rakaratidzirwa, mazana evatengi vakagutsikana, uye timu dzakasiyana revarairidzi, Semalt iboka rine mutengo unoziva wevanhu vakazvipira kushanda newe kuti uone kuti unokwanisa kuzadzisa zvinangwa zvako.
Isu takaona maitiro e AutoSEO, FullSEO, E-CommerceSEO, Analytics, uye SSL zvese zviwanikwa zvavo mukutyaira traffic kune webhusaiti yako. Neboka ravo revanyanzvi uye maneja, iwe uchawana akakosha mazwi, uye backlinks anodiwa kuunza webhusaiti yako kumusoro kweGoogle.